Ubhodloze iminyango eminingi evulela owesintu uMphephethe - Bayede News
UNgulub’ encane uphakamise umculo wesintu waba negalelo ekuwuphakamiseni sanekuwuthuthukiseni
AKWEJWAYELEKILE ukuthi umuntu enikezwe amandla nesikhadlana esincane kodwa yena lokhu akusebenzise hhayi nje ngokuphindwa kaninginingi kodwa akwenze kusebenzele isizwe sonkana. Lawa ngamagalelo engqalabutho yakithi uMnu Welcome Nzimande odume ngelika “Bhodloza” owazalwa ngonyaka we-1947 endaweni yasePhatheni, eRichmond maphakathi nesifundazwe iKwaZulu-Natal.
UMnu uWelcome Bhodloza Nzimande, oseyisikhulu seMvunonala Holdings wabamba elikhulu iqhaza ekuthandweni komculo kamaskandi, umbhaqanga kanye nesicathamiya. Kumaskandi nguye owaqhamuka nohlelo lokuthungatha abaculi bakamaskandi abanekhono ebambisene noMfiliseni Magubane kwaze kwavela “inxele likaMgquzula” uMfazomnyama. Ubambe elikhulu iqhaza ekudlalweni kwawo lo mculo lapho eqhamuka nonqambothi lohlelo aluqamba ngokuthi u‘Sigiya Ngengoma’, nokuyilo olukhuthaze abaculi abaningi kumaskandi kwaze kwaba bayanda njengoba sebewumise njengomculo wegugu namhlanje.
Njengomsakazi weRadio Zulu eseyaziwa ngo-Ukhozi FM namhlanje wayebuye ashayele uhlelo olwalubizwa ngo-Ezidlubhedu nalapho abamba khona iqhaza ekwaziseni umphakathi ngeSoul Brothers iqembu lomculo wombhaqanga. UMnu uCyril Bongani ‘Kansas City’ Mchunu yena-ke washayelela isipikili sokugcina ngokudumisa izwe lonke iqembu iSoul Brothers aze alipha nezibongelo zokuthi Ogandaganda baseNingizimu Afrika.
Esicathamiyeni uMphephethe wayegabavula nohlelo olwalaziwa ngeZiqubuka Olwandle nalapha amaqembu embube ayewanika khona ithuba lokuthi adlalwe emsakazweni futhi azimakethe nasemphakathini.
UNzimande usebenze iminyaka engama-32 kwa SABC kanti wagcina esenyuselwe ukuba umphathi (Station Manager) ngenxa yekhono lakhe ekuholeni nasebuhlakanini bokuqhamuka nezinto ezisiza futhi zikhulise isizwe saboHlanga. Uqale ukusebenza njengomsakazi ngoNcwaba we-1978, nalapho ayebuye ahlele, atolike abuye afunde nezindaba. Uyaziwa futhi ngekhono lakhe elingisa emidlalweni eminingi yomoya okubalwa kuyo nethi Yiz’Uvalo eyayibhalwe uMnu Eric Ngcobo neyadla eminingi imihlanganiso lena.
UNzimande uneziqu zobuthisha kuHigher Primary Teacher’s Certificate (HPTC) nayithola e-Indaleni Training College (1970). Ngonyaka we-1995 uNzimande wazuza iziqu ze B. Admin e-University of Zululand, ophikweni lwase-Umlaza. Ubuye wenza izifundo zokuphatha nokuhola amabhizinisi kuGraduate School of Business (UDW) naseGordon Institute of Business Science e-University of Pretoria.
Njengomsakazi uyaziwa ngobuchule bokuqhamuka nohlelo lwasekuseni oluthi Vuk’ukhanye Afrika oselwaziwa ngeVuka Breakfast Show namuhla. Kanti uhlelo lwakhe lukaPhumela Eshashalazini lwamakhela elikhulu igama ikakhulu ngeqhaza lakhe lokuhlanganisa izinhlaka zezinhlangano zepolitiki i-African National Congress (ANC) ne-Inkatha Freedom Party (IFP) nezazibhekene ngeziqu zamehlo kufa nabantu eRichmond. Wabamba elikhulu iqhaza ekuqedweni kodlame kule ndawo ngokuhlanganisa abaholi banhlangothi zombili futhi eqikelela nokuthi uma kuyohlanganwa bahamba ngemoto eyodwa ukuze kugwemeke ukulalelana unyendle.
Nasendaweni yaseHammersdale uNzimande wasebenzisa amandla omsakazo womoya ngohlelo lwakhe ngokuhlanganisa abaholi uMnu uMlaba (IFP) noMnu uRadebe (ANC) nalapho abanxusa khona ukuba bakhuze udlame lwezombusazwe kule ndawo yaseMpumalanga.
Kwezobuciko akagcinanga nje ngokusakaza emsakazweni kodwa wabonakala eseshayela uhlelo oluthi Ezodumo nolwalukhuthaza umculo wesintu onhlobonhlobo. Waqokelwa njengoMphathi woKhozi FM ngonyaka we-1997. Ngenkathi ethatha izintambo njengomphathi woKhozi FM lesi siteshi sasinabalandeli abayizigidi ezintathu kuphela kodwa sekuphethe yena banyuke baze badlulelela ezigidini ezingaphezu kweziyisithupha. Uthathe umhlalaphansi kulesi siteshi ngonyaka wezi-2010 eseyojoyina inkampani yeMvunonala Investments. Njengomphathi kuKhozi FM waqhamuka nezinhlelo zokuqashwa kwabasakazi abasebasha abafika nomfutho okubalwa oTshatha Ngobe noNonhlanhla ‘Mroza’ Buthelezi namanje abasayibambile futhi abanegalelo.
UNzimande ubambe elikhulu iqhaza ekuqikeleleni ukugcinwa komculo oyigugu wesintu ngokungachemi nokwenza aze abe ingxenye yokusungulwa kwenhlangano iSouth African Traditional Music Association (SATMA), ebambe elikhulu iqhaza ekuvunjululweni kwamakhono omculo waboHlanga ezweni lonke lakuleli,
Akekho ongalazi iqhaza alibambayo ngenkathi esungula Izingqungqulu Zomhlaba ekhuthaza ukubambisana kubaculi abadumile ku-maskandi oPhuzekhemisi, uMfazomnyama, noHhashi eliMhlophe. Lokhu kwakhuthaza abaculi abaningi emculweni kamaskandi ekubumbaneni nasekwehleni kokugxibhana okungathi shu.
Kumanje umfo kaNzimande usesungule iBhodloza Nzimande Foundation (BNF) nalapho ephokophele khona ekuqhubekeni nokufukula umculo wesintu nasekufundiseni abaculi ngobumqoka bokuzihlinzeka ekongiweni kwezimali abazithola ngokusebenza kwabo njengabaculi namaciko kanye nasekuqikeleleni ukuthi bayazibhekela nasezibonelelweni zokuhlelela ikusasa labo ukuze kugwemeke ukushona kwabo behlwempu. Ube neqhaza elikhulu futhi ekwakhiweni kweFET yaseRichmond nalokhu ayisebenza ukuba ibe khona kusukela eminyakeni eyishumi eyedlule. Lokhu kusengezinye zezibonelo zobuholi bakhe nokukhathalela imfundo nokuthuthukiswa kwemiphakathi ikakhulukazi embonini yezobuciko. Ubuye abe ngomunye wabeluleki eMnyangweni Wezabasebenzi kuleli.
Okuphawulekayo ngoNzimande ukuthi uyilo muntu ongenamona futhi ongamdleli omunye umuntu umona nokuyinto engandile kubaholi abafana naye endlini yakithi. Lapho kukhona khona uMphephethe kunokuthula kanti uhlale eqhamuka nezixazululo njalo ngendlela eyakhayo. UNzimande uyilo muntu imboni yezobuciko emdingayo njengomeluleki ngenxa yegalelo lakhe kule mboni kanye nokwazi ngebhizinisi layo.
Namhlanje sikhuluma ngokuziqhenya ngomculo wesintu nje kuleli kungenxa kaNgulub’encane.
Uyalimela ngempela igama lakhe uWelcome ngoba njalo uma unaye uhlale wemukelekile kanti akekho ongaphika ukuthi le nsizwa yaseNdaleni iyona ekhuthaze ukubuyela emasisweni emculweni wesintu kuleli. Yikho kanye lokhu okumenze neTheku lagcina selimchoma uphaphe lwegwalagwala njenge-EThekwini Living Legend!